पञ्चेबाजामा रमाउँदै र संस्कृती संरक्षण गर्दै रुकुम पश्चिमका महिलाहरु ! (फोटो फिचर) – HostKhabar ::
पञ्चेबाजामा रमाउँदै र संस्कृती संरक्षण गर्दै रुकुम पश्चिमका महिलाहरु ! (फोटो फिचर)
रुकुम पश्चिम : खलंगा बजारदेखि सेरी गाउँसम्म गरिने प्रभातफेरी होस् या सदरमुकाममा गरिने कुनै कार्यक्रममा, पञ्चेबाजाको रौनक थप्ने काम यहाँका महिलाहरु नै गर्दछन् ।
वि.सं. २०५२ देखि १० बर्ष चलेको शसस्त्र संघर्षले खारिएको कर्णालीको जिल्ला रुकुम पश्चिममा महिलाहरुले समाजका लागि धेरै योगदान गरेको देखिन्छ ।
उनीहरु खेतीपाती देखि व्यवसायिक कामहरु गरेर आत्मनिर्भर मात्रै भएका छैनन्, बरु संस्कृती संरक्षण र व्यवसायिक रुपमैं पञ्चेबाजा बजाउन पनि अग्र पंतीमा रहेका छन् । त्यसैले जिल्लामा हुने हरेक कार्यक्रममा महिलाहरुलाई पञ्चेबाजा बजाउने जिम्मा दिइएको हुन्छ ।
जिल्लामा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै– प्रभातफेरी, ¥याली र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा महिलाहरुले बजाउने पञ्चेबाजा नै सबैको रोजाइ बन्दै गएको छ ।
विभिन्न शुभ कार्यमा पुरुषले मात्रै बजाउँदै आएको पञ्चे बाजा केहि वर्षदेखि रुकुम पश्चिमका महिलाहरुले पनि बजाउन थालेका छन् । उनीहरुको लोकप्रियता पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । होष्ट खवरले यि प्रतिभावान सहासी महिलाहरुको अदमय सहास र कलाकौशललाई तस्विरमा उर्ताने कोशीस गरेको छ ।
पछिल्लो समय पञ्चेबाजा बजाउने चलन हराउँदै जान थालेकोमा रुकुमका महिलाहरु भने झनै उत्साहित छन् । महिलाले बाजा बजाउने र नृत्य समेत देखाउने गरेका छन् ।
मुसीकोट नगरपालिका–१, सालघारीमा रहेको पञ्चेबाजा संरक्षण महिला समूहले यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरेको छ । २०७१ फागुनदेखि निरन्तर रुपमा महिलाका काँधमा दमाहा र ट्याम्की, मुखमा सनही र नरसिङा, हातमा छिल्लर लगायतका बाजा छन् ।
कुनै कार्यक्रम, अवसर, दिवस, मेला, पर्व, चुनाव जस्ता कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसकारी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले पञ्चेबाजाका लागि यिनै महिलाहरुलाई गुहार्ने गर्छन् ।
पञ्चेबाजा समूहकी अध्यक्ष हिरा परियारले महिला समूहबाटै पैसा संकलन गरेर बाजा खरिद गरेर बजाउन सुरु गरेको बताइन् । उनका अनुसार सुरुका केही दिनसम्म पुरुषहरुले बाजा बजाउन सिकाइदिएका थिए ।
पञ्चेबाजा अब महिलाको आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ । एउटा कार्यक्रममा पञ्चेबाजा बजाएबापत १२ हजार सम्म लिने गरेका छन् । तर त्यसमा कार्यक्रमको आर्थिक अवस्था हेरेर शुल्क लिने गरेको समूहकी अध्यक्ष परियारले बताइन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावत मार्फत सरकारलाई आयुर्वेदिक औषधी हस्तान्तरण
वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार देखि आंशिक रुपमा खाने पानी बितरण हुने, पुर्ण रुपमा आउन १ महिना लाग्ने
मुगुको सोरु गाउँपालिकामा कोरोना कोषको रकम रक्सीमा स्वाहा !
डोल्पामा जीप व्यवसायीको मनपरी, १४ किमी सडकमा ८०० भाडा